ကောင်လေးငယ်ရဲ့ အိမ်ကလေး: 2013
ငါတို့ နှစ်ယောက်အတူတူ တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်
နင့်လက်လေးကိုတွဲပီး အတူတူ လျှောက်လည်ခွင့်
ငါတို့ နှစ်ယောက်အတူတူ ရှိနေခွင့်ရတဲ့အချိန်
အမှတ်တရလေးတွေနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေ
ငါတို့ နှစ်ယောက်အတူတူ ရှိနေခွင့်ရကြတဲ့အခါ
ဆင်တူ လက်စွပ်လေးတွေနဲ့ အတူ ငါတို့ အချစ်တွေလဲ အမြဲထာဝရ
ငါတို့ နှစ်ယောက်ဆုံတွေ့ ခွင့်ရရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ
အများကြီးနဲ့ငါကတော့ နင် ပြန်လာမဲ့ အချိန်လေးကို အမြဲတမ်း
Posted by wai da nar at 8/28/2013 11:10:00 PM No comments:
ငါကို လွမ်းဆွေးစေတဲ.လား ...။
Posted by wai da nar at 8/20/2013 09:15:00 PM No comments:
ငါတို့ နှစ်ယောက်က ဟိုးအဝေးကြီးထိ ဘ၀တစ်ခုကို
အတူတူ လျှောက်လှမ်းသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားကျတာပဲ
ငါတို့ နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက် အပေါ်ကိုတစ်ယောက်
နားလည်မှုတွေပေးနိုင်မှ အချိန်တွေအကြာကြီး လက်တွဲသွားနိုင်မှာ
ငါ မှားနေတယ်လို့နင်ထင်တဲ့ အရာတွေကို ငါ့ကို ပြောမပြပဲ
စိတ်ဆိုး...စိတ်ကောက်နေမဲ့အစား ပွင့်လင်းမှုရှိမှသာ ငါလဲ ပြုပြင်
ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်လား..... ????
နင့် စိတ်ထဲမှာ ငါ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ တစ်ခုခု ခံစားနေရတဲ့
အချိန်ဆို ငါ့ အပေါ်သံသယတွေ တွေးမနေပါနဲ့ငါရဲ့ ချစ်သူဆိုတာ
နင့် အပြင်တစ်ခြားတစ်ယောက်မရှိတာ နင်သိနေတာပဲ...
ယုံကြည်နေပေးပါ..... နင်နဲ့ အတူတူလျှောက်လှမ်းရမယ်ဆိုတဲ့
ဘ၀တစ်ခုအတွက် ငါ့နေ့ ရက်တွေတိုင်းကို အကောင်းဆုံး ကြိုစားပီး ဖြတ်သန်းနေတာပါ.........ချစ်သူရယ်
Posted by wai da nar at 6/30/2013 10:22:00 PM No comments:
Posted by wai da nar at 6/30/2013 10:16:00 PM No comments:
ဒါန တရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
သီလ တရားဖြင့် အန်ိုင်ယူပါ။
ဝိပဿနာ တရားဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
Posted by wai da nar at 6/30/2013 10:12:00 PM No comments:
Facebook က News Feed ဒီဇိုင်းသစ် ပေးတော့မှာပါ။ ဇူကာဘတ် ကိုယ်တိုင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ့ ရှင်းလင်းပြသပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီ ရရှိတော့မှာပါ။ ယင်း ဒီဇိုင်းသစ် Timeline ကို အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင် အောက်ပါ လခ့်မှာ ဝင်လို့ Waiting List ကို cick နှိပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် Facebook က News Feed ဗားရှင်း အသစ်ပေးတဲ့အခါ ကိုယ့်ဟာ လည်း အလိုအလျောက်ပြောင်းသွားမှာပါ။ ထူးခြားတာကတော့ ပုံခပ်ကြီးကြီး ခပ်ရှင်းရှင်းမြင်ရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဗားရှင်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ ဗားရှင်း ကွာခြားမှု သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ စာထက် ပုံ လိုဂို အသုံးပြုမှုများလာမယ့် ဗားရှင်း အသစ်က မိုဘိုင်းနဲ့တောင် နီးစပ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
Fresh Feed တို့လို UI လည်းပါလာပြီး ကိုယ် Feed လိုချင်တဲ့ Soure တွေဆီကနေပဲ ရအောင် Option ပေးထားလို့လည်းရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် News Feed ဗားရှင်း အသစ်ကို လိုချင်ရင် အောက်ပါ လခ့်မှာ ဝင်ရောက်၍ Click လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Posted by wai da nar at 6/29/2013 08:46:00 AM No comments:
Folder,Files ,Drive တွေကို တစ်ပါးသူမမြင်နိုင်အောင် Passwords ပေးပြီး Lock , Unlock လုပ်ချင်သူများအ
တွက်နာမည်ကြီး Software လေးဖြစ်ပါတယ်.. Version အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါပြီခင်မျာ။
Myanmar IT Helper မှပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
Posted by wai da nar at 6/26/2013 12:48:00 AM No comments:
Myanmar Font Installer v 1.0 Beta For Android မြန်မာ Font ထည့်နည်း
မြန်မာစာနဲ့မြန်မာလက်ကွက် အသုံးပြုဖို့ Root Access လိုအပ်ပါတယ်…
Root ရှိတဲ့ဖုန်းတွေအနေနဲ့ ဒီ Installer လေးကနေ
Posted by wai da nar at 6/26/2013 12:36:00 AM No comments:
Labels: ဖုန်းအတွက် Myanmar Font
Samsung Android ဖုန်းများအတွက် Pattera Or Pin Lock ဖြုတ်နည်း
Samsung Android ဖုန်းကို Wifiမလို Gmail လည်းထည့်စရာမလိုပဲ
Pattern or Pin Lock ဖြုတ်လို့ ရတဲ့နည်းလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
Pattern or Pin Lock ကိုဖြုတ်ဖို့ အတွက်အဆင့်သုံးဆင့်လိုပါတယ်။
(၁) Lock ကျနေသောဖုန်းကိုအရင်ဆုံးဓာတ်ခဲကိုချွတ်ရပါမယ်...
(၂)ဖြုတ်ထားသောဓာတ်ခဲကိုပြန်တပ်ပြီး Power,Volume key နှင့်အလည်မှနှိပ်စေ့လေးကိုပြိုင်
တူဖိထားလိုက်ပါ...ခဏအကြာတွင် Screen ပေါ်တွင် English စာကြောင်းများပေါ်လာလိမ့်မည်
အဲ့စာကြောင်းများထဲမှReset all ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..ခဏတွင်ဖုန်း ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်..ပြန်ပွင့်
လာလို့ ရှိရင် Lock အားလုံး ပြုတ်သွားပါပြီ..နဂိုတိုင်းသုံးလို့ လိုရသွားပါလိမ့်မယ်..
(၃)မြန်မာဖောင့်နှင့်အခြား Apk များကိုတော့ပြန်ထည့်ပေးရန်လိုပါသည်...
လမင်းမြတ်(TCK) မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
Posted by wai da nar at 6/24/2013 07:20:00 PM No comments:
လှပတဲ့အိမ်မက်တခုကို စိတ်ကူးလိုက်နေရုံနဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပင်မယ့်
လှပတဲ့ဘဝ ရဖို့ တော့ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားမှ အကောင်ထည်ဖော်လို့ ရတယ်
တကယ့်လက်တွေ့ အချစ်မှာ တကယ်ချစ်တဲ့သူသာအပြန်လှန် သည်းခံနားလည်ပေးနိုင်တယ်
တချိူ့ လူတွေက အနာဂတ် ဘဝလှပတဲ့လူတွေကို အားကျ ကြတယ်
ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့လည်းဆိုတာကိုတော့ မသိချင်ကြဘူး
တချိူ့ စုံတွဲတွေက အဆင်ပြေပျော်နေတဲ့ ချစ်သူအတွဲကိုအားကျကြတယ်
ဒါပေမယ့် သူတို့ တွေဘယ်လောက်ထိချစ်ပြီးနားလည်ပေးနေကြတာကို မသိချင်ကြဘူး
သူများ တွေကြိုးစားတဲ့အချိန် ကိုယ်ပါကြိုးစားသင့်တယ်
ဘဝ ဆိုတာ အမြဲအဆင်ပြေနေပါ့မယ်လို့ သင့်ကို အာမခံချက်မှမပေးထားတာ~~~
အမုန်းမရှိသော အချစ်မရှိသော အလွမ်းမရှိသောသူဖြစ်ရပါစေ
Posted by wai da nar at 6/19/2013 12:04:00 AM No comments:
(၁) တစ်နေ့ အရာအာလုံးကို စွန့်ခွာသွားရမှာ..
တစ်နေ့ အားလုံးအားလုံးကို ထားသွားရအုံးမှာ.. ဆိုတာ ခဏခဏ တွေးပေးပါ။
(၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မပိုင်တာ..
ငါပိုင်တာ တကယ်တမ်းတော့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိပါလားလို့ ခဏခဏ ဆင်ခြင်နေပေးပါ။
(၃) ငါ သေရအုံးမှာ..
အချိန်မရွေး ငါသေသွားနိုင်တယ်လို့လည်း ခဏခဏ ရွတ်ရွတ်ပေးပါ။
ခုစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲ.. ဆိုတာမျိုး
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်အမြဲတမ်း သတိရတိုင်းရတိုင်း ပြန်ပြန်ကြည့်နေပေးပါ။ ပြန်ပြန်သိနေပေးပါ။
ငါ့ဘဝမှာ ငါတကယ်တမ်း တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာဟာ ဘာလဲ?
ခုလုပ်နေတာတွေဟာ ငါဘာကိုတန်ဖိုးထားပြီး လုပ်နေကိုင်နေပြောနေတာလဲ?
ငါတန်ဖိုးအထားဆုံးအရာဟာ တကယ်တမ်း နောက်ဆုံးတော့ အားကိုးရရဲ့လား?
ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် မမေ့မလျော့ ပြန်ပြန်မေးပါ။
(ကိုယ့်ကိုကိုယ် မလိမ်မညာပဲဖြေရင် အမှန်တွေနဲ့ အကောင်းတရားတွေနဲ့ နီးလာပြီ)
(၆) ဖြစ်နေတဲ့ အဆိုးတွေရော အကောင်းတွေရောဟာ
ဘာမှ မမြဲဘူး။ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ တခဏလေးတွေချည်းပဲ။
သင်္ခါရတရားတွေ အချိန်ပြည့် နှိပ်စက်နေတာလို့ အမြဲနှလုံးသွင်းနေကြည့်လိုက်ပါ။
သဘာဝကို သဘာဝ၊ အမှန်ကို အမှန်လို့
ကြည့်တတ် မြင်တတ် လက်ခံတတ်တာ လက်ခံနိုင်တာဟာ သတ္တိရှိလို့ပါ။
သဘာဝအမှန်တရားကို လက်ခံနိုင်ရင် စိတ်ဓါတ်ရင့်ကျက်လာပြီ။
အရှိကိုအရှိအတိုင်း အမှန်တရားကို အမှန်အတိုင်း လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကပဲ
အရာရာအပေါ်ကို balance အဖြစ် မြင်တတ်လာလိမ့်မယ်။
အဲဒီလက်ခံနိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကပဲ ကိုယ့်ဘဝကို တကယ်တမ်း
ဘာရှေ့ဆက်လုပ်ရမလဲ ဘယ်အရာတွေကို မလုပ်သင့်တော့ဘူး။
ဘယ်အရာတွေတော့ ပိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ လမ်းပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
နေတတ်ထိုင်တတ်အောင် စိတ်ချမ်းသာနေအောင်လည်း အပြည့်အဝ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ဖတ်ထားပြီးရော ပြီးရင်မေ့ မလုပ်ပဲ…
အဲဒီအတွေးတွေကို မမေ့မလျော့ သတိတရ တွေးတွေးနေပေးဖို့တော့ လိုတယ်။
တကယ် တွေးတွေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါ လက်တွေ့ စိတ်ချမ်းသာလာတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။
တချို့အရာတွေက သူများရေးထားတာဖတ်တာထက် ကိုယ်ကိုတိုင် လက်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါ အဲဒီအရသာက ပိုပြီးစိတ်ကိုကြည်နူးကျေနပ်စေတယ်။ တချို့အမြင်တွေက ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်ကြည့်လာမှ မြင်လာတယ်။ ပြီးမှ ဟုတ်ပါလားလို့ပေါ့..။ေ၇းထားတဲ့စာလေးနဲ့ ရပ်မနေပဲ ဒီထက်ပိုပြီးချဲ့တွေးစေချင်တာရယ်ပါ။
ဥပမာအနေနဲ့ “တစ်နေ့ အရာအာလုံးကို စွန့်ခွာသွားရမှာ.. တစ်နေ့ အားလုံးအားလုံးကို ထားသွားရအုံးမှာ.. ဆိုတာ ခဏခဏ တွေးပေးပါ” လို့ ရေးထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်စိတ်ရင်းနဲ့ တွေးပေးလိုက်ရင် မတရားသဖြင့်လိုချင်တဲ့ မတရားလောဘတွေနဲသွားစေတယ်။ ငါစွန့်သွားရမှာပဲ..။ မတရားသဖြင့် လိုချင်မက်မောတာတွေနဲ့ မတရားလုပ်မနေတော့ပါဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတယ်။ ဒီထက်မကကို ကျယ်ပြန့်လွန်းပါတယ်။
“ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မပိုင်တာ.. ငါပိုင်တာ တကယ်တမ်းတော့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိပါလားလို့ ခဏခဏ ဆင်ခြင်နေပေးပါ” ဆိုတာကို ဆင်ခြင်တဲ့အခါ.. ကိုယ်တကယ်ပိုင်လို့မရတဲ့အရာတွေရှိလာရင် ကိုယ်တကယ်လုပ်ယူလို့မရတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာရင် အဲဒီတွေးနည်းက တော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်..။ အဲဒီဆင်ခြင်နည်းက တော်တော်စိတ်ကိုသက်သာစေလိမ့်မယ်နော်။
“ငါ သေရအုံးမှာ.. အချိန်မရွေး ငါသေသွားနိုင်တယ်လို့လည်း ခဏခဏ ရွတ်ရွတ်ပေးပါ” လို့ နှလုံးသွင်းကြည့်ရင်… စာဖတ်သူ သေသေချာချာစိတ်နှစ်ပြီး နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ပါ..။ ဘယ်လိုခံစားရလဲလို့..။ ဒါဆိုရင် ရေးနေစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူးနော်..။ အနည်းဆုံးဥပမာလေးကတော့ မာန်တွေ တော်တော်လျော့သွားစေတယ်..။
“ငါဘာတွေတွေးနေလဲ? ဘာတွေခံစားနေလဲ ? ခုစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲ.. ဆိုတာမျိုး ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်အမြဲတမ်း သတိရတိုင်းရတိုင်း ပြန်ပြန်ကြည့်နေပေးပါ။ ပြန်ပြန်သိနေပေးပါ”
အဲဒီအတိုင်း ပြန်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ်အကြောင်း ကိုယ်သိလာတယ်။ ပိုသိလာတယ်။ ကိုယ်ကောင်းတာလည်းသိလာလိမ့်မယ်။ ကိုယ်မကောင်းတာလည်း သိလာလိမ့်မယ်။ ဆရာတော်ဦးဇောတိကစာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးလက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့သူတွေဆိုရင် အထူးသိပြီးသားတွေပါ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲကခံစားမှုတွေကို စောင့်ကြည့်ပါများလာရင် မကောင်းတာတွေတွေးတာတွေ မကောင်းတာပြောတော့မှာတွေ မကောင်းတာလုပ်တော့မှာတွေကို ခွင့်မပြုတော့ဘူး။
အသေးစားဥပမာအနေနဲ့ ဒေါသအားကြီးလို့ ဒေါသကြီးလိုက်တာကိုတောင် အနည်းဆုံး ဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သိနေတယ်။ သိနေတော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေ မလုပ်ဖြစ်အောင် စိတ်ကပြောနေတယ်။ တုံ့ခနဲ့ ရပ်နိုင်တာ မရပ်နိုင်တာတော့ အလေ့အကျင့်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတွေက အများကြီးပဲ..။ အကျိုးများလွန်းလို့ လုပ်ကြည့်စေချင်တာရယ်ပါ။ အဓိကက အလေ့အကျင့်ရှိဖို့ အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ရယ်ပါ..။
ကိုယ့်အတွေးတွေကို ပြောင်းလိုက်ရင် ကိုယ့်လောကလည်း ပြောင်းသွားပါတယ် (ဆရာတော်ဦးဇောတိက)။
ကိုယ့်နှလုံးရဲ့ နှလုံးသွင်းနည်းတွေကို ပြောင်းပစ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ဘဝလည်း ပြောင်းသွားမယ်။
ဘယ်လိုအခက်အခဲ အကြီးအသေးတွေကြုံကြုံ ကိုယ်စိတ်ထားတတ်ရင် အိုခေနေတယ်ဆိုတာ သိလာလိမ့်မယ်။ အခက်အခဲက သေးနေပါစေ ကိုယ်စိတ်မထားတတ်ရင် စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာ သိလာလိမ့်မယ်။ အဲဒါမို့လို့ အဲဒါတွေအပေါ်ထားတဲ့ မြင်တဲ့ ကိုယ့်အတွေးတွေ၊ ကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့နည်းတွေက အရမ်းအရေးကြီးနေပါတယ်။
You Change Your World…
by Changing Your heart…”
Posted by wai da nar at 6/18/2013 09:28:00 PM No comments:
သစ်ပင်တပင်သက်သက်ပါပဲ ။ ။
Posted by wai da nar at 6/13/2013 09:29:00 PM No comments:
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အမြဲတမ်းနာကျင်နေစေတတ်တယ် ။ ။
Posted by wai da nar at 6/13/2013 09:26:00 PM No comments:
Screenshot ကွန်ပြူတာ screen ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်
window 8မှာတော့ search ကိုအရင်ဆုံး
အဲလိုပေါ်လာရင် အဲထဲမှာ ပြာဝိုင်းလေးပြထားတဲ့
snipping tool ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ
နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကိုလိုချင်တဲ့ အတိုင်းရွေးပြီး
Rectangular Snip ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်
window8 window7 .. allprogram ကို ဝင်လိုက်တာနဲ့
system tools ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကိုရှာပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ.. အထပ်ပုံပါအတိုင်း
snipping tool ဆိုတာတွေပါလိမ့်မယ်..
ဒီ post လေးကို မသိသေးသောသူတွေအတွက်
Posted by wai da nar at 5/29/2013 11:00:00 PM No comments:
Labels: Screenshot ရိုက်နည်း
ရွှေဘိုမြို့ကို ငါးမည်ရပြည်ရွှေဘို ဟု ခေါ်လေ့ရှိကြသည်။
ရွှေဘိုမြို့၏ ငါးမည်ငါးဘွဲ့ကား မုဆိုးပို၊ ရတနာသိင်္ဃ၊ကုန်းဘောင်၊ရန်ကြီးအောင်၊ ရွှေဘို တို့ဖြစ်သည်။
စင်စစ်သော်ကား ကျန် လေးမည်မှာ မုဆိုးပို တွင် တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သော ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ အဓိပတိ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ မင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိပြီး
( ၁၁၁၅) ခုနှစ်တွင် မြို့နန်းတည်ထောင်သောအခါ တွင်မှစပြီး ပေါ်ထွန်းလာသော အမည်နာမများဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ မုဆိုးပိုမြို့သည် ပုဂံ နရပတိစည်သူမင်း ( ဒုတိယစည်သူဟုလည်းခေါ်ဆိုကြသည်) ၏ လက်ထက်တွင် မုဆိုးငပိုကို အပိုင်စားပေးရာမှ ပေါ်ထွန်းလာသည်ဟု လေ့လာဖူးပါသည်။
ရွှေဘိုမြို့သည် 22°34’13.84″N နှင့် 95°41’54.82″E တွင်တည်ရှိပါသည်။ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားကားလမ်းနှင့် မီးရထားလမ်း နှစ်ခုဆုံရာနေရာ မန္တလေးမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် ၆၄ မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ မန္တလေးမြို့မှ ၄နာရီ အတွင်း ရွှေဘိုမြို့သို့ ကားဖြင့် သွားရောက်နိုင်သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေးရှိ ကျောက်မြောင်းမြို့၏ အနောက်ဘက် ၁၇ မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။
ပျူယဉ်ကျေးမှု မြို့ဟောင်း ဟံလင်း သည် ရွှေဘိုမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၁၀မိုင် အကွာတွင်တည်ရှိပြီး ရွှေဘိုမြို့မှ ကား ဖြင့် နှစ်နာရီ အတွင်း အရောက်သွား၍လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Posted by wai da nar at 5/25/2013 08:19:00 PM No comments:
Posted by wai da nar at 4/04/2013 06:53:00 PM No comments:
သူရဲ့ အဓိကထားရတဲ့ အလုပ်ကြီးတခုလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်...။
သူရဲ့ အဓိကထားရတဲ့ တာဝန်ကြီးတရပ်ကိုဖြစ်လာခဲ့တယ်...။
သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀လေးတခုဖြစ်လာခဲ့တယ်......။
ဝေးတိုင်းလည်း အားမငယ်နဲ့ 
လွမ်းတိုင်းလည်း မငိုနဲ့ 
ဘယ်သူကကော ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အဝေးမှာ နေချင်ပါ့မလဲ
လူချင်းသာ ဝေးပါစေ ချစ်သူ
နှလုံးသားချင်း ဆုပ်ကိုင်ထားမှတော့ ဘယ်သူမှ ကြားဝင်လို့ မရဘူး
မင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ Scan ဖတ်ထားတယ်
မင်းရဲ့လှုပ်ရှားပုံကို ငါ့ရဲ့မျက်စိ မှာ Install လုပ်ထားတယ်
မင်းရဲ့ စကားသံတွေကို ငါ့ရဲ့နားမှာ record လုပ်ထားတယ်
မင်းရဲ့အချစ်တွေကို ငါ့တကိုယ်လုံး DownLoad ဆွဲထားတယ်
ကဲ ဘာ လို သေး လဲ ချစ် သူ ရယ်~~~
( ဇင် နှင်း )============
အရာရာ ကိုယ်ထင်တိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လို့ပါ..။
အရာရာဟာ ကိုယ်နဲ့မှ မသက်ဆိုင်တော့တာ..။
အချစ်ဆိုတာ တွေဝေလွန်းရင် ခံစားရသလို
Posted by wai da nar at 4/04/2013 06:32:00 PM No comments:
တခါတလေ ငါတွေးမိတယ်ချစ်သူ ~~~ ငါဘာကြောင့်များ
နင်ကို အရမ်းချစ်နေရလဲ ဆိုတာပေါ့ .........ဒီမေးခွန်းငါအတွက် အဖြေမရှိတဲ့မေးခွန်းဘဲ ချစ်တာကို ချစ်တာလို့ဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ငါတွေးနေမိတယ်။
တခါတလေ ငါတွေးမိတယ်ချစ်သူ ~~~ငါဘာကြောင့်များ နင်ကို ဒီလောက် သ၀န်တိုတတ်တာလဲ ဆိုတာကိုပေါ့ ........ငါချစ်တဲ့သူကို သ၀န်တိုဆိုတာ အကြောင်းပြချက်မရှိ အရမ်းချစ်လို့ပါ။
တခါတလေ ငါတွေးကြောက်မိတယ်ချစ်သူ ~~~ ငါအနားက နင်သာထွက်သွားရင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ငါကိုယ်ငါ ခြောက်လန့်နေတတ်တယ် ....ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နင်ကလွဲရင် တခြားတစ်ယောက်ကို ငါအချစ်တွေ မပေးနိုင်လောက်အောင် ငါတနေ့ထက်တနေ့ နင်ကို ပိုချစ်လာလို့ဘဲ။
Posted by wai da nar at 3/06/2013 01:24:00 AM No comments:
ငှက်ကလေးတွေကမေးတယ်… မင်းမှာ ချစ်သူအများကြီးရှိလားတဲ့… ငါကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်… ချစ်သူအများကြီးမရှိပါဘူး… ဒါပေမယ့်…ရှိတဲ့တစ်ယောက်ကို အများကြီးချစ်ပါတယ်လို့......။
ကို တို့ နှစ်ယောက် မတွေ့ ရသေးပေမဲ့…
အမြဲတမ်း မင်းလေးရဲ့ အရိပ်ထက် ပိုတဲ့
ကို ရဲ့စိတ်က မင်းလေး နားမှာ
ချစ်သူလေး ပျော်ရွှင်ပါစေ …………..။
မိုးရွာသလို အားလုံးအတွက် မဟုတ်ပေမယ့် …..
နင့်အတွက်တော့ ငါက အေးချမ်းစေမှာပါ …....။
ငါသည် သူ့ကိုချစ်၏။ ထိုသို့ချစ်သောကြောင့်
ခံစားရသော ဒုက္ခသည် ကြီးစွ၊ ထိုဒုက္ခသည်
ကြီးစွာသော ပီတိကိုဖြစ်စေ၏။ ဟိသစ္စံ ဤစကားမှန်၏၊
ဤမှန်သော သစ္စာစကားကြောင့် ငါသည် ဘ၀ဆက်တိုင်း
အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းက ကြော်ငြာထဲမှာပဲရှိတယ်။ လုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့လူက ကဗျာထဲမှာပဲရှိတယ်။ လုံးဝအပြစ်ကင်းတဲ့အချစ်က ဝတ္ထုထဲမှာပဲရှိတယ်။
မှားတယ် နောင်တတော့ရဘူး ငိုတယ် မျက်ရည်တော့ကျဘူး ခံစားတယ် မပေါက်ကွဲဘူး ကျေကွဲတယ် ၀မ်းမနည်းဘူး လွမ်းနေတယ် ထုတ်မပြဘူး ..!!
ယှက်နွယ်ခဲ့တာ သံယောဇဉ်တွေပါ မင်းသုံးနေကျ အရက်ပျံမဟုတ်ဘူး စိတ်ထဲမပါပဲ ငါ့ဆီမလာနဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ကုပေးမယ့်သမားတော်လည်းမဟုတ်ပါဘူး..........။
ငှက်တစ်ကောင်ကိုချစ်မိမှတော့ လွတ်လပ်ခြင်းကိုပါ ငါနားလည်ပေးရတော့မှာပေါ့ … ♥ ငါမချုပ်ချယ်ပါဘူး မင်းအတောင်ညောင်းရင် နားခိုအိပ်စက်တတ်တဲ့ သစ်ပင်တိုင်းပဲ ငါဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ…♥♥♥
.ပုံပြောခဲ့တာလား..ချစ်သူရယ်… စဥ်းစားတိုင်း ငါထိတ်လန့်နေခဲ့.မမြင်နိုင်တဲ့ ငါနောက်ကွယ်မှာ နင်ဘယ်လိုရှိမယ်. ငါမသိခဲ့.. တွေးမိတိုင်းငါ.. ရင်မောတယ်. သတိရသေးလား ကိုယ့်ချစ်သူလေးရယ်.. ညစဉ်တိုင်းငါ.. ငိုမိတယ်.. ဒီမျက်ရည်များစွာ ခမ်းကုန်သွားလိမ့်.. မငိုနိုင်တော့ဘူး. ကြာ၇င် ငါရူးလိမ့်မယ်
အိပ်မက်တိုင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ စကားလုံးတိုင်း အချိန်မှီပြောခွင့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ အချစ်တိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အဆုံးသတ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by wai da nar at 3/06/2013 01:12:00 AM No comments:
ကို မင်းကို သိပ်ချစ်တယ်.......။
Posted by wai da nar at 3/06/2013 01:07:00 AM No comments:
• ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒီကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်သူနဲ့မှ နှိုင်းပြီး မယှဉ်ပြိုင်ပါနဲ့ ။ အဲဒီလို ပြိုင်လိုက်တာဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စော်ကား လိုက်တာပါပဲ ။
• ဘယ်သူမှ သော့တံမရှိတဲ့ သော့ခလောက်ကို မဖန်တီးပါဘူး ။ အဲဒီလိုပဲ မြတ်စွာဘုရားကလည်း အဖြေမရှိတဲ့ ပြဿနာကို မပေးပါဘူး ။
• သင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါမှာ ဘ၀က သင့်ကိုရယ်တယ် ။ သင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါမှာ ဘ၀က သင့်ကို ပြုံးပြီးကြည့်တယ် ။ သင်သူများတွေကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ ဘ၀က သင့်ကို အလေးပြုတယ် ။
• အောင်မြင်သူတိုင်းမှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ရှိဖူးပါတယ် ။ ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုင်းမှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်သိမ်းတစ်ခု ရှိပါတယ် ။
• လွယ်တာက သူများရဲ့အမှားကို ဝေဖန်အကဲဖြတ်ဖို့ပါ ။ ခက်တာကတော့ ကိုယ့်အပြစ်ကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်ဖို့ပါ ။
• ဘယ်သူမှ အတိတ်ကို ပြန်သွားပြီး ဆိုးရွားတဲ့အစကို ပြင်လို့မရပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်တဲ့ အဆုံးသတ်ရဖို့ အခု ချက်ချင်း စတင် လှုပ်ရှားတာကိုတော့ လူတိုင်းလုပ်လို့ ရပါတယ် ။
• ပြဿနာတစ်ခုဟာ ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တာဆိုရင် ဘာမှစိတ်ပူစရာ မလိုပါဘူး ။ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ဘူး ဆိုရင်လည်း စိတ်ပူနေလို့ ဘာများ ထူးမှာ မို့လို့လဲ ။
• အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုရင် သင့်မျက်လုံးတွေကို မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်မနေပါစေနဲ့ ။ မျက်ရည်တွေက သင့်ရှေ့က ပို ကောင်းတဲ့ နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ကွယ်ပစ်လိုက်ပါလိမ့်မယ် ။
• မျက်နှာကိုပြုပြင်လိုက်တာ (Changing the face) ဟာ ဘာကိုမှ ပြောင်းလဲစေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အပြောင်းအလဲကို ရင်ဆိုင်လိုက်တာ (Facing the change) ကတော့ အရာရာကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်
• သူများတွေအကြောင်း မကျေမနပ် ညည်းညူမနေပါနဲ့ ။ ငြိမ်းချမ်းချင်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ပြောင်းလဲပြုပြင်လိုက်ပါ ။
• အမှားတွေက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ နာကျင်ပင်ပန်းစေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နှစ်တွေကြာလာလို့ အဲဒီအမှားတွေ စုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သင့်ကို အောင်မြင်မှုဆီ ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် “အတွေ့အကြုံ” ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ် ။
• ကျရှုံးတဲ့အချိန်မှာ ရဲရင့်မှုရှိပါ ။ အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာ တည်ငြိမ်မှုရှိပါ ။
• အပူပေးခံထားရတဲ့ ရွှေတွေဟာ အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ် ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နန်းဆွဲခံထားရတဲ့ ကြေးတွေ ဟာ ၀ိုင်ယာကြိုးတွေ ဖြစ်လာပါတယ် ။ ထွင်းထုခံထားရတဲ့ ကျောက်တုံးတွေဟာလည်း ရုပ်ထုတွေ ဖြစ်လာပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သင့်ဘ၀မှာ နာကျင်မှုခံစားရမှုတွေ များလာလေ
သင့်ရဲ့တန်ဖိုးတက်လာလေပါပဲ ။ by kothu1987
Posted by wai da nar at 3/06/2013 01:02:00 AM No comments:
မိဘဂုဏ် (၁၂) ပါး
၄။ အိမ်စောင့် အိမ်ဦး နတ်မြတ်ထူး အထူးပူဇော်မည်။
၉။ ပူပန်ကြီးစွာ စောင့်ရှောက်ကာ ကာကွယ်ပေးကြသည်။
မိဘတို့သည် သားသမီးအပေါ်တွင် မည်မျှကောင်းကြောင်းကို
အချို့သော သားသမီးတို့သည် မိဘကို ပစ်ပယ်၍
ဘိုးဘွားရိပ်သာ သို့ပို့ထားကြသည်။အချို့ သော သားသမီးများက
မိဘတို့ကို စော်ကားကြသည်၊ ထိုသို့သာ သားသမီးများက
မိဘကိုစော်ကားနေလျှင် ငရဲရောက်မည်မှာ ဧကန်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ မဖြစ်ရလေအောင် လူတိုင်းသိရှိပြီး
၁။ သားသမီးအပေါ်တွင် ထာဝစဉ်
မေတ္တာထားသောကြောင့် ဗြဟ္မာ ဖြစ်ပါသည်....
၂။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဒီလိုစား၊ဒီလိုသွား၊ဒီလိုနေ
ဟူ၍ သင်ကြားပြသပေးသောကြောင့်လက်ဦးဆရာ ဖြစ်သည်။
၃။ မိဘသည် ရပ်ဝေးတွင် စီးပွားရှာ၍ သားသမီးကိုကျွေးမွေးသည်။
သားသမီးကလည်း ထိုသို့ ပြန်လည် လုပ်ကျွေး ထိုက်သော
အာဟုနေယျ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။
၄။ သားသမီး ရှာဖွေသည်ကို မပျောက်ပျက်အောင်
တိုးတက်အောင် စောင့်ရှောက်ပေးသော ပုဗ္ပဒေဝတာ ဖြစ် သည်။
၅။ သားသမီးမမွေးခင် ကတည်းက
ကြိုတင်ချစ်ခင်လွန်းသောကြောင့် သုဟဒ ဟုမည်သည်။
၆။ လူဖြစ်အောင် မွေးဖွားပေးခဲ့သော
မိခင်၏ ဂုဏ်ကို ဇနေတ္ထိ ဟုခေါ်သည်။
၈။ ယုယကြင်နာစွာ မွေးဖွားပေးခဲ့သော
မိခင်၏ဂုဏ်ကို ပေါသေန္တ ဟုခေါ်သည်။
၉။ အမြဲတစဉ် စောင့်ရှောက်နေတတ်သောကြောင့်
ပြောပြသောကြောင့် ဒေဿတာရ ဟုခေါ်သည်။
၁၁။ သားသမီးများကို ချော့ပြော၊နားဝင်အောင်
ပြောသောကြောင့် တောသယန္တိ ဂုဏ်မည်သည်။
၁၂။ ကိုယ်သုံးဖို့ ရှာထားသောပစ္စည်းကို
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်မသုံးရက် ၊မစားရက်အောင် သားသမီး အတွက်
ချန်ထားသောကြောင့် ရသော ဂုဏ်ကို ဂေါပယန္တိ ဟုခေါ်သည်။
စကားချပ်။ ။ ပါဠိစာပေကို များစွာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသောကြောင့်
အချို့ သော ပါဠိစာသားများမှားယွင်းမှု ရှိခဲ့သော် ကျွန်ုပ်၏
ကောက်နှုတ် ဖော်ပြ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။။
Credit to :အဆိုအမိန့် များနှင့် ဗဟုသုတဆိုင်ရာစာပေများ
Posted by wai da nar at 2/05/2013 08:17:00 PM No comments:
နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်များနှင့် ထိုဘုရားရှင်တို့ ပွင့်တော်မူရာ ဗော
ဓိပင်များကိုလည်းကောင်း၊ ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော်သည် တဏှင်္ကရာ၊ မေဓင်္ကရာ၊ သရဏင်္ကရာဘုရားများထံမှ အနိယတဗျာ ဒိတ်တော် ခံယူခဲ့ပုံများနှင့် ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားမှ အစပြု၍ ကဿ ပမြတ်စွာဘုရားတိုင်အောင် နိယတဗျာဒိတ်တော် ခံယူပုံများကို ဖော်ပြပေး ထားပါသည်။
၁။ တဏှင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား ပွင့်ရာ ဗောဓိ-စရည်းပင်
သာရမဏ္ဍကမ္ဘာဝယ် ပုပ္ပ၀တီပြည်၌ ခမည်းတော် နန္ဒ၊ မယ်တော် သုနန္ဒလတို့မှ ဖွားမြင်တော်မူပြီး၊ ဆင်ယာဉ်နှင့် တောထွက်တော်မူကာ (၇)ရက်ကြာ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တော်မူပြီးနောက် စရည်းဗောဓိပင်ရင်း၌ ဘုရားဖြစ်တော်မူလေသည်။
၂။ မေဓင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်ရာ ဗောဓိ-သခွတ်ပင်
သာရမဏ္ဍကမ္ဘာဝယ် ၀ိပူလပြည်၌ ခမည်းတော် သုမင်္ဂလ၊ မယ်တော် ယသ၀တီတို့မှ ဖွားမြင်တော်မူပြီး၊ မြင်းယာဉ်နှင့် တောထွက်တော်မူကာ၊ လခွဲကြာ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တော်မူပြီးနောက် သခွတ်ဗောဓိပင်ရင်း၌ ဘုရားဖြစ်တော်မူလေသည်။
၃။ သရဏင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ပေါက်ပင်
သာရမဏ္ဍကမ္ဘာဝယ် မေဃလပြည်၌ ခမည်းတော် သုဒေ၀၊ မယ်တော် ယသောဓရာတို့မှ ဖွားမြင်တော်မူပြီး၊ ဆင်ယာဉ်နှင့် တောထွက်တော်မူကာ (၁၅)ရက်ကြာ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တော်မူပြီးနောက် ပေါက်ဗောဓိပင်ရင်း၌ ဘုရား ဖြစ်တော်မူလေသည်။
၄။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား ပွင့်ရာ ဗောဓိ-ညောင်ကြတ်ပင်
အလောင်းတော် သုမေဓာရှင်ရသေ့သည် မြတ်စွာဘုရား ကြွရာလမ်းပြုပြင် ရာဝယ် ကိုယ်ကို တံတားခင်း၍လှူဒါန်း၏။ ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားသည် သုမေဓာရှင်ရသေ့ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၅။ ကောဏ္ဍညမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-နပဲပင်
အလောင်းတော် ၀ိဇီတာဝီစကြာမင်းသည် ကောဏ္ဍည မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးရန် ကျောင်းတော်ကို စီမံ၍ ဆွမ်းအစရှိသော အလှူကြီးပေး ၏။ ကောဏ္ဍညမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် ၀ိဇိတာဝီစကြာမင်း ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရား ဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၆။ မင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကံ့ကော်ပင်
အလောင်းတော် သုရုစိပုဏ္ဏားသည် ရတနာအတိပြီးသော မဏ္ဍပ်ကြီးေ ဆာက်လုပ်၍ မင်္ဂလမြတ်စွာဘုရား အမှူးရှိသော သာဝကများကို (၇)ရက် ပတ်လုံး အလှူကြီးပေး၏။ မင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် သုရုစိပုဏ္ဏားကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ေ
၇။ သုမနမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကံ့ကော်ပင်
အလောင်းတော် အတုလနဂါးမင်းကြီးသည် သုမန မြတ်စွာဘုရားကို နတ်၌ဖြစ်သော တူရိယာများဖြင့် ပူဇော်၍ ဆွမ်း အဖျော်တို့ကို လှူတော်
မူ၏။ သုမန မြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် အတုလနဂါး မင်းကြီး ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၈။ ရေ၀တမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကံ့ကော်ပင်
အလောင်းတော် အတိဒေ၀ပုဏ္ဏားသည် ရေ၀တ မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်များကို ဂါထာတစ်ထောင်ဖြင့် ချီးကျူးပူဇော်ပြီး အဖိုး တစ်ထောင်ထိုက်သော အပေါ်ဝတ်ရုံကို လှူဒါန်း၏။ ရေ၀တ မြတ်စွာ ဘုရားသည် အတိဒေ၀ပုဏ္ဏားကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ် မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၉။ သောဘိတမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကံ့ကော်ပင်
ရှိသော ရဟန်းသံဃာတော်များကို ၀ါတွင်းသုံးလပတ်လုံး ကြီးစွာသော အလှူကြီးပေး၏။ သောဘိတမြတ်စွာဘုရားသည် သုဇာတပုဏ္ဏား ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၁၀။ အနောမဒဿီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ထောက်ကြံ့ပင်
အလောင်းတော်ဘီလူးစစ်သူကြီးသည် အနောမဒဿီမြတ်စွာဘုရား အမှူးရှိသော သံဃာတော်များကို ရတနာခုနှစ်ပါးအတိပြီးသော မဏ္ဍပ် အတွင်း၌ (၇)ရက်ပတ်လုံး ဆွမ်းစသော အလှူကြီးပေး၏။ အနောမ ဒဿီမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော်ဘီလူးစစ်သူကြီးကို နောင်သော အခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၁၁။ ပဒုမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကြောင်လျှာပင်
အလောင်းတော် ခြင်္သေ့မင်းသည် (၇)ရက်ပတ်လုံး နိရောဓသမာပတ် ၀င်စားတော်မူသော ပဒုမမြတ်စွာဘုရားကို အလွန်ကြည်ညိုပြီး ဆည်း ကပ်နေ၏။ ရဟန်းသံဃာများကိုလည်း ကြည်ညိုဆည်းကပ်၏။ ပဒုမမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော်ခြင်္သေ့မင်းကို နောင်သော အခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၁၂။ နရဒမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကြောင်လျှာပင်
အလောင်းတော်ရသေ့သည် နာရဒမြတ်စွာဘုရားအမှူးပြုသော သံဃာတော်များကို ဆွမ်းအလှူကြီးပေး၏။ ဟိမ၀န္တာမှ စန္ဒကူးနံ့ သာနီကိုဆောင်ယူကာ လှူဒါန်း၏။ နာရဒမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော်ရသေ့ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၁၃။ ပဒုမုတ္တရမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ထင်းရှူးပင်
အလောင်းတော် ဇဋိလသူဌေးကြီးသည် ပဒုမုတ္တရမြတ်စွာဘုရား အမှူးပြုသော သံဃာတော်များကို ဆွမ်းခဲဖွယ်ဘောဇဉ်နှင့် သင်္ကန်းလျှာ အ၀တ်အထည်ကြီးများ ပေးလှူ၏။ ပဒုမုတ္တရမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော်ဇဋိလသူဌေးကြီးကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်
၁၄။ သုမေဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကမာကြီးပင်
အလောင်းတော် ဥတ္တရမည်သောလုလင်သည် မိမိစုဆောင်းထားသော ပစ္စည်းတို့ကို သုမေဓမြတ်စွာဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်များကို လှူဒါန်းပြီး သာသနာတော်၌ ရဟန်းပြု၏။ သုမေဓမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် ဥတ္တရလုလင်ကို နောင်သော အခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ် မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၁၅။ သုဇာတမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကြခတ်ဝါးပင်
အလောင်းတော် စကြာမင်းသည် သုဇာတမြတ်စွာဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်များကို ရတနာခုနှစ်ပါးနှင့် ထီးနန်းစည်းစိမ်တို့ကို လှူဒါန်း၍ ရဟန်းပြု၏။ သုဇာတမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော်စကြာမင်း ရဟန်းကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော် မူသည်။
၁၆။ ပီယဒဿီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ရေခံတက်ပင်
အလောင်းတော် ကဿပပုဏ္ဏားလုလင်သည် အလွန်ကောင်းမြတ်သော သံဃာ့အာရာမ်ကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း၏။ ရတနာသုံးပါးနှင့်တကွ ငါးပါးသီလ ဆောက်တည်ကျင့်သုံး၏။ ပီယဒဿီမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် ကဿပလုလင်ကို နောင်သော အခါ၌ ဂေါတမ ဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၁၇။ အတ္ထဒဿီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-စကားပင်
အလောင်းတော်သုသီမပုဏ္ဏားသည် မိမိဥစ္စာတို့ကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတို့အား လှူဒါန်း၍ ရသေ့ပြုလေ၏။ သုသီမရှင်ရသေ့သည် အတ္ထဒဿီမြတ်စွာ ဘုရားကို နတ်၌ဖြစ်သော ပဒုမာကြာပန်း၊ ပင်လယ်ကသစ်ပန်းတို့ကို လှူဒါန်း၏။ အတ္ထဒဿီမြတ်စွာဘုရားသည် သုသီမရှင်ရသေ့ကို နောင်သော အခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၁၈။ ဓမ္မဒဿီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-သံသတ်ပင်
အလောင်းတော်သိကြားမင်းသည် နတ်အပေါင်းခြံရံလျက် နတ်၌ဖြစ်သော နံ့သာပန်း၊ တူရိယာမျိုးတို့ဖြင့် ဓမ္မဒဿီမြတ်စွာဘုရားကို ပူဇေဓာ်၏။ ဓမ္မဒဿီမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် သိကြားမင်းကို နောင်သော အခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၁၉။ သိဒ္ဓတ္ထမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-မဟာလှေကားပင်
အလောင်းတော် မင်္ဂလပုဏ္ဏားသည် မိမိပိုင်ဥစ္စာတို့ကို သူဆင်းရဲတို့အား စွန့်ကြဲပြီး၊ ရသေ့ပြု၍ဈာန်အဘိညာဉ်ရ၏။ သိဒ္ဓတ္ထမြတ်စွာဘုရားအမှူးပြုေ သာ သံဃာတော်များကို ဈာန်အဘိညာဉ်တန်ခိုးဖြင့် ဗဇမ္ဗုသပြေသီး ယူဆောင်လှူဒါန်း၏။ သိဒ္ဓတ္ထမြတ်စွာဘုရားသည် မင်္ဂလရသေ့ကိုနောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၀။ တိဿမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ပိတောက်ပင်
အလောင်းတော်သုဇာတမင်းသည် ထီးနန်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်၍ ရသေ့ပြု၏။ နတ်၌ဖြစ်သောပန်းတို့ကို တန်ခိုးဖြင့်ယူဆောင်ပြီး မြတ်စွာ ဘုရားကို ပူဓေဇာ်၏။ ပဒုမ္မာထီးတစ်လက်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားဦးခေါင်းတော် ၌ ဆောင်းမိုးပူဇော်၏။ တိဿမြတ်စွာဘုရားသည် သုဇာတရသေ့ ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရား ဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၁။ ဖုဿမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-သျှိသျှားပင်
အလောင်းတော် ၀ိဇိတာဝီမင်းကြီးသည် ကြီးစွာသောအလှူကြီး လှူဒါန်းကာ ထီးနန်းစည်းစိမ်စွန့်လျက် ရဟန်းပြု၏။ ဖုဿမြတ်စွာဘုရားသည် ၀ိဇိတာဝီရဟန်းတော်ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၂။ ၀ိပဿီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-သခွတ်ပင်
အလောင်းတော် အတုလနဂါးမင်းသည် ရတနာမဏ္ဍပ်တော်ကြီးေ ဆာက်လုပ်၍ ၀ိပဿီမြတ်စွာဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်များကို သီတင်းသုံးစေပြီး (၇)ရက်ပတ်လုံး အလှူကြီးပေး၏။ ရတနာခုနှစ်ပါးဖြင့် စီခြယ်သော ရွှေဓအင်ပျဉ်ကိုလှူ၏။ ၀ိပဿီမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် အတုလနဂါးမင်းကို နောင်သော အခါ၌ ဂေါတမ ဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၃။ သိခီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-သရက်ဖြူပင်
အလောင်းတော် အရိန္ဒမမင်းသည် သိခီမြတ်စွာဘုရား အမှူးပြုသော သံဃာတော်မြတ်များကို တန်ဆာဆင်အပ်သော မင်္ဂလာဆင်တော်နှင့် တကွ တန်ဖိုးညီမျှသော အပ္ပိယ၀တ္ထုပစ္စည်းတို့ကို လှူ၏။ သိခီမြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် အရိန္ဒမမင်းကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၄။ ဝေဿဘူမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-အင်ကြင်းပင်
အလောင်းတော် သုဒဿနမင်းသည် ဝေဿဘူမြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးရန် ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်ကြီးနှင့် ရဟန်းသံဃာတော်များ သီတင်းသုံးရန် ကျောင်းပေါင်းတစ်ထောင် ၀န်းရံဆောက်လုပ်လှူဒါန်း၍ ရဟန်းပြု၏။ ဝေဿဘူမြတ်စွာဘုရားသည် သုဒဿနရဟန်မြတ် ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၅။ ကကုသန္ဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ကုက္ကိုပင်
အလောင်းတော် ခေမမင်းသည် ကကုသန္ဓ မြတ်စွာဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်များအား သပိတ်သင်္ကန်းများနှင့် ဆေးဝါးတို့ကို လှူဒါန်း၍ ရဟန်းပြု၏။ ကကုသန္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ခေမမင်း ရဟန်းကို နောင်သော အခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၆။ ကောဏာဂမနမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ရေသဖန်းပင်
အလောင်းတော် ပဗ္ဗတမင်းသည် ၀ါတွင်းသုံးလပတ်လုံး ကောဏာ ဂနမမြတ်စွာဘုရားနှင့် တပည့်သံဃာတော်များကို ပြုစုလုပ်ကျွေးကာ ပိုးဖဲကမ္ဗလာစသော အဖိုးတန် အထည်များကို လှူ၏။ ကောဏာဂမ န မြတ်စွာဘုရားသည် အလောင်းတော် ပဗ္ဗတမင်းကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၇။ ကဿပမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ပညောင်ပင်
အလောင်းတော် ဇောတိပါလလုလင်သည် ကဿပမြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်ကို ကြားနာရ၍ ရဟန်းပြုလျက် ပရိယတ္တိသာသနာကို အလုံးစုံသင်ကြား၏။ ကဿပမြတ်စွာဘုရားသည် ဇောတိပါ လရဟန်း ကို နောင်သောအခါ၌ ဂေါတမဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
၂၈။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ ဗောဓိ-ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်
အလောင်းတော် သိဒ္ဓိမင်းသားသည် ကပိလ၀တ်နေပြည်တော်၌ ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီး၊ မယ်တော် သီရိမဟာမာယာဒေ၀ီ မိဖုရားကြီးတို့မှ ဖွားမြင်တော်မူပြီး ကဏ္ဍိကမြင်းယာဉ်တော်စီး ကာ တောထွက်တော်မူ၏။ ဒုက္ကရစရိယာ ၆နှစ်ကြာကျင့်တော်မူပြီး မဟာဗောဓိ ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်ရင်း၌ ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။
You'realways Onmymind တွင်ဖော်ပြသောအကြောင်းအရာကို
လိမ္မာယဉ်ကျေးပညာပေးသင်တန်းကျောင်း Facebook မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
Posted by wai da nar at 2/05/2013 07:46:00 PM No comments:
ပြည်ချစ် တို့ ခေါင်းဆောင်။
၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါသည်။
Posted by wai da nar at 2/05/2013 07:40:00 PM No comments:
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ ?
နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေဖြစ်ပြီဆိုရင် လာတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေဆိုပြီးရှိပါတယ် ။ အကြမ်းဖျဉ်းတွေး ကြည့်မယ်ဆိုရင် တောင် သွေးကြောဟာ ရေပိုက်လုံးတစ်ခုလို မြင်ယောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီရေပိုက်လုံး နံရံတွေ ထူလာလေလေ သွေးစီးဆင်းတဲ့အပေါက်က ကျဉ်းလာလေလေမဟုတ်ပါလား ။ ဒီလိုမျိုးသွေးကြောတွေ ကို အဆီဖတ်အဆီခဲတွေ ဖုံးပြီးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းကိုတော့ ဆေးပညာအရ Atherosclerosis လို့ခေါ်ပါတယ် ။ သွေးကြောအဆီဖုံးခြင်းဟာ နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောရောဂါ (Coronary heart disease ) တွေဖြစ်တဲ့ Angina (ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း) ၊ Myocardial Infarction (နှလုံးပုပ်ခြင်း ) ၊ Sudden death ( ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း ) စတဲ့ အရာတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ် ။ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းပြီး နှလုံး ထဲကို အောက်ဆီဂျင် သိပ်မရောက်တော့ တဲ့ရောဂါကို Ischaemic heart disease (IHD) နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းရောဂါလို့ ခေါ်ကြ ပါတယ် ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းဆိုးလာပြီးကျဉ်း လာတဲ့အခါ နှလုံး ရဲ့အချို့သော ဧရိယာတွေ မှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်သော လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် ။ ယေဘူယျကြည့်မယ်ဆိုရင် ဧရိယာတစ်ခု ဟာ သွေးကနေတဆင့် အောက်ဆီ၈ျင် ရောက်လာမှုနည်းသွားရင် အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်ခြင်း Ischaemia ကို စတင်ခံစားရပါတယ် ။ အဲဒီထက်တဆင့်ဆိုးပြီး အောက်ဆီဂျင်လုံးဝမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ပုပ်သွားခြင်း (Infarction) ကို ခံစားရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် IHD ဟာ နှလုံးပုပ်ခြင်း ( Myocardial Infarction) ရဲ့ ရှေ့ပြေး လို့ဆိုလည်းမမှားနိုင်ပါဘူး ။
- Chest Pain ဟာ ရင်ဘတ်ရဲ့ အလယ်ခေါင်တည့်တည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
- Ischaemic Chest Pain ဟာ အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာ လည်ပင်းနောက် မေးရိုး နဲ့ လက် အပေါ်နဲ့လက်အောက်ပိုင်းတွေကိုတောင်ပျံနှံ့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ရင်ဘတ်အောင့်တာဟာ ဘယ် ဖက် အရှေ့ ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ် ဘယ်ဖက်တစ်ခြမ်းကိုပဲ ပျံ့နှံ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အခြားအ ချက်ပေါင်း များစွာဖြစ်တဲ့ ကြွက်သားနဲ့အရိုးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (သို့မဟုတ်) anxiety စသည်တို့ ကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
- နှလုံးအောင့်မယ်ဆိုရင် မစူးရှပဲ ထူပိန်းပိန်း (dull ) ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဆွဲဆုပ်ထား သလိုအောင့် ပြီးလေးလံတဲ့အရာကြီးနဲ့ ဖိထားသလို ခံစားရပါတယ် ။ ဓါးနဲ့ထိုးသလို စူးရှပြီးအောင့်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။
- Anginal pain ဟာ လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေစဉ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး နားလိုက်တဲ့အခါငါးမိနစ်လောက်အတွင်း ပြန်သက် သာ သွားလေ့ရှိပါတယ် ။ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေနဲ့လည်း ဆိုင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဒေါသထွက်စရာ ကြုံရတဲ့အ ခါ ပိုပြီးပြီးအောင့်တတ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်အစာအများကြီးစားထားတဲ့အခါ လေအေးတွေ အတိုက်ခံရ တဲ့အခါ မှာ လည်းပိုပြီးအောင့်နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒါက အကြမ်းဖျဉ်းနား လည်လွယ်အောင် တင်ပြထား တာဖြစ်ပါ တယ် ။ Ischaemic pain ကို ခွဲခြားတဲ့အခြားအချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ် ။ ။
- သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များသူများ ( Hypercholesterolaemia)
- စိတ်ဖိစီးမှုများသူများ (stress)
၁ ။ Coronary Angioplasty - ပိတ်နေတဲ့ သွေးကြောတွေ ကို သွေးကြောအတွင်း လေသွင်း တဲ့ ဘောလုံးလေး ထိပ်မှာပါတဲ့ ရှည်မျောမျော ပလပ်စတစ် tube Catheter ထည့်ပေးပြီး ကျယ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒါကို Stent ထည့်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ။
၂ ။ Coronary Artery Bypass Grafting ( CABG ) - လူနာရဲ့ ပိတ်ဆို့နေတဲ့သွေးကြောတွေကို ဖြတ်တောက်ပြီး ပိတ်ဆို့မှုကို သက်သာအောင် သွေးကြောတွေကို ကိုင်းဆက်ကူးခြင်း (grafting ) လုပ်ခြင်းဖြစ် ပါတယ် ။ Bypass လုပ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ Indications တွေကတော့ အခုနောက်ပိုင်း မှာ limited ဖြစ်လို့လာပါပြီ ။ Bypass surgery သည် ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေ ခြင်းနဲ့ quality of life ကိုသာလျှင် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ် ။ သူဟာ Life expectancy လို့ခေါ်တဲ့ အသက်ရှင်မှု အာမခံချက် ဘယ်လောက်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာတော့မရှိပါဘူး ။ သေချာကုသလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ လူနာအများ စုဟာ ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ ဘ၀ကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကုသမှုတွေထဲမှာ ပုံမှန်လေ့ကျင့် ခန်းလုပ်ခြင်း ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း ၊ အစားအသောက်ထိမ်းချုပ်ခြင်း နဲ့ လူနေမှု ဘ၀ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ် ။
သက်တန့်ချို Facebook စာမျက်နှာမှ မှုရင်းတိုင်းပြန်လည်ဖေါ်ပြထားပါသည်.
Posted by wai da nar at 2/05/2013 01:44:00 PM No comments:
၁။ မောင်အောင်ဆန်းသည် ၁၉၃၂-တွင် တက္ကသိုလ်သို့ရောက်၏။ ထိုစဉ်ကသူ့အသက် ၁၇ နှစ်သာ ရှိသေး၏။
၂။ အသက် ၂၀ အရွယ်တွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှထုတ်ဝေသော အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၏ တာဝန်ခံ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့၏။
၃။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်တွင် ကျောင်းသား သပိတ်ကြီး၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်ခဲ့၏။
၄။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရ၏။
၅။ အသက် ၂၃ နှစ်တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တို့ဗမာ (သခင်)အစည်းအရုံး၌ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာ၏။
၆။သာယာဝတီ ညီလာခံ၌ ဗြိတိသျှအစိုးရကို လက်နက်ဖြင့် တော်လှန်ပုံကန်ရန် အစီ အစဉ်များ ရေးဆွဲပေးခဲ့စဉ်က သူ၏အသက်မှာ ၂၅ နှစ်သာရှိသေး၏။
(ထိုစဉ်သူ၏ရဲဘော် ရဲဘက်များက သူ၏လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်တော်လှန်ရေး အစီအစဉ်များကို လုပ်လို့ဖြစ်ပါ့ မလား -- လက်နက်ဘယ်ကရမှာမို့လဲ စသည်ဖြင့် သံသယရှိကြ၏။ မောင်အောင်ဆန်းသည် ခေါင်းဆောင်ပီပီ မိမိလုပ်ငန်း၌ တွေဝေခြင်းမရှိ စိတ်အားလျော့တတ်ခြင်းမရှိ ``ဓားပြဂိုဏ်း တွေတောင်မှ လက်နက်ရအောင် ရှာနိုင်သေးတာ ကျုပ်တို့ကော ဘာဖြစ်လို့ လက်နက်မရှာ နိုင်ရမှာလဲ``ဟု တွေဝေနေသော သူ၏ရဲဘော်များကို ပြန်ပြောခဲ့၏။)
၇။ အသက် ၂၅ နှစ်သာသာတွင် လက်နက်ကိုင်တော်လှန် ပုန်ကန်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြား အကူအညီ ရနိုင်ရန် မြန်မာပြည်မှ တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားခဲ့၏။
၈။ ဗြိတိသျှတို့ကို တိုက်ခိုက်ရန် ``ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်``ကို ဖွဲ့စည်းကာ စစ်ဦးစီးဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် ခေါင်းဆောင် ကွပ်ကဲ၍ မြန်မာပြည်တွင်း ချီတက်လာချိန်မှာ သူ့အသက်ကား ၂၆ နှစ်အရွယ်ပင် ရှိသေး၏။
၉။အသက် ၃၀-အရွယ်တွင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကို ဦးဆောင်မှုပြု၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကတွင် မကြုံစဘူးသော အမျိုးသားညီညွတ်ရေး တပ်ဦးဖြစ်သည့် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကို တောင့်တင်းကြီးမားအောင် တည်ဆောက်စည်းရုံးခဲ့၏။
၁၀။ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်တွင် သူတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာ့ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများဖြစ်သော ဗြိတိသျှအစိုးရအဖွဲ့ ဗြိတိသျှဘုရင်ခံတို့နှင့် ဥာဏ်ကစားလျက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ ပြောဆိုနိုင်ခဲ့၏။
၁၁။ ဗြိတိသျှတို့နှင့် အကြိတ်အနယ်အင်အား ပြိုင်အရေးဆိုပြောကြားပြီးနောက် ``တစ်နှစ် အတွင်း လုံးဝလွတ်လပ်ရေးရရမယ်`` ဟု ကြုံးဝါးကတိပေးခဲ့စဉ်က အသက်မှာ ၃၂ နှစ်သာ ရှိသေး၏။
၁၂။ သူ့အသက် ၃၂-နှစ်တွင် ပထမဆုံး တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ခေါ်ယူကျင်းပပြီးလျှင် လွတ်လပ်သော သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကို စတင်အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့၏။
၁၃။ သူ့အသက် ၃၃ နှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေး ဗိမာန်ကြီးကို အုတ်မြစ်ချတည်ဆောက်ပေးပြီး မသမာသူများ၏ လုပ်ကြံမှုဖြင့် ကျဆုံးသွားရလေ၏။
ဤအသက်အပိုင်းမျှဖြင့် သူလုပ်သွားခဲ့သော ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများကို ကြည့်၍ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ဘယ်လိုလူဖြစ်သည် ဘယ်လိုပညာထက်မြက်ခဲ့သည်၊ ဘယ်လိုဆရာသမား တွေက နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သည် ဆိုသည်တို့ကို အတုယူလိုက်နာ သင့်ပေသည်။
Posted by wai da nar at 2/05/2013 01:30:00 PM No comments:
Labels: လူတစ်ယောက်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဲမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ညီတော် အရှင်အာနန္ဒာကဲ့သို့တရားတော်၊ မြတ်ဓမ္မတို့ ရဲ့ ဘဏ္ဍာတိုက် ..။
သူ့ ဥာဏ်တော်ကို အများအကျိုး အတွက်အချိန်ပြည့် မနေမနား အသုံးချပေးခဲ့သူ .. ..။
မျိုးဖျက် အဓမ္မတို့ ၏ ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆန့် ကျင်ခဲ့သူ ...။
တပည့်သံဃာတော်တွေကို ထိလာလျှင် သူကိုယ်တိုင်ပင် ရှေ့ ကရပ်၍ ကာကွယ်ပေးရဲသူ . .။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်အတွက် အတုယူဖွယ်ရာ နိဗ္ဗာန်ဆော် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ပါး . .။
ဘ၀နေ၀င်ချိန်ထိတိုင် လက်နှိပ်စက်တစ်လုံးဖြင့် ဓမ္မစာပေများကို ဘာသာပြန်ဆိုပေးခဲ့သူ ...။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ သေသည်အထိ သာသနာပြုနေပုံ . . .။
Posted by wai da nar at 1/24/2013 12:43:00 AM No comments:
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မြေမျက်နှာ သွင်ပြင်များစွာ ရှိတဲ့နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီထဲကမှ စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ လူတွေရဲ့ ဖန်တီးမှုမပါဘဲ အရောင် သုံးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရေကန်ကြီးများ အကြောင်းပါ။ မီးတောင်တွေ များစွာရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီ မီးတောင်တွေကြောင့်ပင် ထူးဆန်းတဲ့ မြေပြင်နဲ့ အံ့သြဖွယ် ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဥပမာတစ်ခုကို ပြရမယ်ဆိုရင် Flores ကျွန်းပေါ်က သုံးရောင်ခြယ် ရေကန်ကြီးကို ပြချင်ပါတယ်။ KELIMUTU တောင်ပေါ်က မီးတောင်ထိပ်ဝဟောင်း တစ်ခုပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရေကန်သုံးခုဟာ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် ရေရဲ့အရောင်ဟာ တစ်ကန်နဲ့တစ်ကန် မတူညီဘဲ တစ်မျိုးစီသော အရောင်အဆင်းဖြင့် ထူးခြားစွာ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ ပါတယ်။ တောင်ထိပ်ပေါ်က အရောင်သုံးမျိုးရေကန်ဟာ နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ အထူး စိတ်ဝင်စားကြပြီး လာရောက်လည်ပတ်ကြတာကြောင့် ကမ္ဘာကျော်နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
Posted by wai da nar at 1/24/2013 12:41:00 AM No comments:
Screenshot ကွန်ပြူတာ screen ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဓါတ...